Wednesday May 27, 2020 - 10:46:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay kaalinta melleteri ee sii xoogaysanaysa oo ruushku uu ku leeyahay wadanka Liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika.
Gen. Stephen Townsend taliyaha AFRICOM
Warbixin kasoo baxday taliska ciidanka Mareykanka Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu faah faahiyay galaangalka melleteri ee dowladda Ruushka ay ku leedahay loollanka sii xoogeysanaya ee ka socda dalka Liibiya.
Gen. Stephen Townsend oo ah taliyaha AFRICOM ayaa sheegay in dowlada Ruushka ay diyaarado dagaal ay geysay dalka Liibiya ayna qorshanayso in ay qaaddo weeraro xagga cirka ah oo lagu taageerayo dagaal ooge Khaliifa Xaftar.
"Ruushku wuxuu doonayaa in miizaanka awoodeed ee dalka Liibiya uu rogo si maslaxadiisu ku jirto" sidaas waxaa yiri Gen. Stephen Townsend.
Ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika wuxuu sheegay in diyaarado dagaal iyo qalab melleteri oo lagasoo daabulay dalka ruushka lageeyay xeebaha wadanka Liibiya, diyaarado kasoo duulay saldhigga Xumeymiim ee galbeedka Suuriya ayaa ku degay bariga Liibiya.
Warbixinta kasoo baxday taliska AFRICOM ayaa lagu caddeeyay sawirro laga qaaday diyaaradaha ruushka oo dul heehaabaya hawada Liibiya iyo iyagoo ku sugan garoon Melleteri oo Liibiya kuyaal.
"Howlgallada Melleteriga Ruushka waxay sii adkaynayaan loollanka ka jira dalka Liibiya waxayna sare usii qaadayaan khasaaraha bashariga ah iyo kuwa maadiga ah" sidaas waxaa markale yiri Gen. Stephen Townsend.
Saldhigga melleteri ee Ruushku uu ka sameysanayo xeebaha wadanka Liibiya ayaa qalqal amni ku beeraya dacalka galbeed ee qaaradda Yurub sida uu sheegay Jeff Harigian oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka qaaradda Yurub.
Dhawaqa Mareykanka ayaa imaanaya xilli maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar iyo ciidamo calooshood ushaqeystayaal Ruush ah looga adkaaday dagaallo sanad qaatay oo ka dhacay galbeedka wadanka Liibiya